Kyrgyzstan: Milasy Eo Anilan’ilay Jiolahy Raindahiny Ao Amin’ny “Lalao Iraisam-pirenen’ny Mpifindramonina”. · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Septambra 2014 13:36 GMT
Ny herinandro lasa teo, nampiantrano ny andiany voalohany tamin’ny Lalao Iraisam-pirenen’ny Mpifindramonina i Kyrgyzstan. Raha avy amin’ny tatitra sasany, vita tsara ny seho, izay nampisongadina ireo mpandray anjara avy amin’ny firenena 19 samihafa. Ny lehilahy mifanandrina amin’ny lehilahy, ny soavaly mifanandrina amin’ny soavaly, ary nahantona teny amin'ny manodidina ireo fatinà osy ho famaliam-paty ny lalao ‘polo’ fahiny izay notontosaina tany amin’ny toerana lavitry ny Eorazia foana, mianga avy eo Afganistana ka hatrany amin’ny ampahan’I Siberia.
Hita ho tohina I Omurbek Tekebayev, MP efa ela tao Kyrgyzstan, izay tsy dia malaza intsony, raha nahatsikaritra fa rehefa natory izy indray alina izay, tao amin’ny toby iray nanorenana “yurt (yurta/yourte)” (trano lay fampiasan'ireo mpifindrafindra toerana ao Azia Afovoany) namboarin’ireo mpikarakara ny hetsika, fa nisodisody teny akaikin’ny varavaran'ny yuorte iray teo akaikiny ilay jiolahy malaza indrindra ao amin’ny firenena. (Trano fonenana fahiny ho an’ireo mpifindra monina ny “yurta”, amin’ny teny Rosianina, “boz üý” amin’ny teny avy ao Kyrgyzstan, na “ger” amin’ny teny Maongôlina. Ilay tenin’i Tekebayevs no taterin’ny masoivohom-baovao ao an-toerana, vb.kg, no manaraka eto).
Kolbayev, izay vao haingana no nigadra nandritra ny iray taona sy tapany noho ny fakàna an-keriny sy ireo fiampangana tamin'ny firaisana tsikombakomba amin’ny asa ratsy, dia sokajian’ny governemanta Amerikanina ho aina manodina ny fanondranana zava-mahadomelina ao Eorazia. Alohan’ny nanamelohana azy, nipetraka fotoana fohy tao Dobay izy, toerana heverna ho nandrindràny fandàvana faobe tsy hnaraka baiko — an’arivony ireo gadra nanakombona ny vavany taorian’ny fihetsiketsehana iray nahafatesana olona — tany amin’ny fonjan’I Kyrgyzstan tamin’ny 2012.
Kianja firiariavan'i Kolbayev tokoa raha nfaritanin'i Issyk-Kul nanaovana ilay Lalao Iraisam-pirenen'ny Mpifindra Monina. Tena faran'izay firiariavany tokoa ka tonga hatramin'ny hoe nomena anarana ho fahatsiarovana ny dadan’i Kolbayev ilay kianja fanantontosana hetsika goavana ara-panatanjahantena. Fananam-panjakana ilay kianja ary tsy nanome alalana velively ny hanovàna ny anarany ny governemanta ao an-toerana, saingy tsy nahasakana ilay fanoloana anarana tsy hiroso anefa izany.
Noho ny tsy nahavitàn’ireo solombavam-bahoaka toa an’i Tekebayev nanangana ny fitokisan’ny vahoaka an'ireo sangany ara-politika eto amin'ny firenena no mahatonga ireo mpanao heloka bevava mbola mitohy manana ny dindony ao Kyrgyzstan. Olon’ny politika avo toerana i Tekebayev, amin'ny naha-mpanoratra fototra ny lalàna parlemantera ao Kyrgyzstan ankehitriny sady filohan’ny ankolafy lehibe ao amin’ny rantsana mpanao lalàna. Voarohirohy noho ny fitoriana azy ho nandray anjara taminà fandrobana nandritra ny fanovàna nisy tao amin’ny firenena tamin’ny 2010 ihany koa izy ary lahatsary iray mamoafady ahitàna azy miboridana miaraka amin’ny vehivavy iray tsy fantatra – tsy ny vadiny – ary nankalazain’ny fahitalavitra Rosiana tao anatin’ny fanomanana ny fifidianana izay ho ao amin'ny antenimiera mpanao lalàna tao Kyrgyzstan tamin’izany taona izany. (Tsy mbola nankafy an’i Tekebayev izany i Kremlin)
Hoy i Sem:
Mpamaky iray hafa no nanao fampitahana tsy dia mahafapo loatra momba ilay ‘Mpangalatra sangany-mifamatotra-amin'ny fianakaviana’ sy ny mpanao lalàna:
Nanitrikitrika ny Iray amin’ireo vehivavy maro mpankafy ilay mpanjakan’ny asa ratsy :
Na dia nisaotra an’i Tekebayev aza ny olona iray satria “izy irery no mpanao politika natanja-tsaina nanonona ny anaran’i Kolbayev “, nanolotro soso-kevitra ny iray hafa fa ny tena fifandrafesan’i Kolbayev amin’I Tekebayev dia mitoetra ao amin’ny fiahian’ilay depiote sampana iray hafa mpanao asa ratsy.
Nobangoin’ i Kyzyl Asker ho iray ny zavatra tsapan’ny rehetra ao Kyrgyzstan, manjavozavo efa ela ilay tsipika manasaraka ny mpanao politika sy ny mpanao asa ratsy ka tsy mila atao sary intsony: